Vicente del Bosque oo kala doortay kan wanaagsan xiddigaha Neymar iyo Mbappé – Gool FM
Vicente del Bosque oo kala doortay kan wanaagsan xiddigaha Neymar iyo Mbappé
Dajiye May 23, 2019
(Yurub) 23 Maajo 2019. Macalinkii hore xulka qaranka Spian ee Vicente del Bosque ayaa doorbiday in kooxda Real Madrid ay sameyso saxiixa Kylian Mbappé, halka ay ka sameyn lahayd xidiga reer Brazil ee Neymar Jr.
Vicente del Bosque ayaa u arka in 20 jirka reer France uu ka maskax fiican yahay saaxiibkiis Neymar, sidaas darteed uu doorbidayo in Los Blancos uu yimaado weeraryahanka PSG ee Mbappé.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu daabacay wareysi uu macalinkii hore xulka qaranka Spian ee Vicente del Bosque kaga hadlay kan u wanaagsan Real Madrid inay sameyso saxiixiisa xiddigaha Neymar Jr iyo Kylian Mbappé wuxuuna yiri.
“Hadii aan mas’uul ka ahaan lahaa kooxda Real Madrid, waxaan la saxiixan lahaa Kylian Mbappé, sababtoo ah wuxuu ka maskax fiican yahay Neymar Jr, xiddiga reer Brazil wuxuu sida carruurta oo kale isugu tuuraa dhulka”.
“Real Madrid waxay heysataa ciyaartooy dhowr ah ee aad u wanaagsan, laakiin natiijada waa mid aad u xun”.
“In laba jeer la badalo macalinka, waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu xun ee ka dhici kara kooxda” ayuu hadalkiisa ku soo xiray macalinkii hore xulka qaranka Spian ee Vicente del Bosque.
Manchester City oo talaabo u jirta soo xero galinta xiddig ka tirsan kooxda Juventus
Manchester City oo ka hadashay wararka ku aadan in Guardiola uu ku biirayo Juventus